किसानलाई मलकै दुःख कहिलेसम्म ? - नागरिक रैबार
किसानलाई मलकै दुःख कहिलेसम्म ?
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष कृषि उत्पादन ३० प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य लिएको छ, जुन पूरा हुन यस क्षेत्रमा आमूल सुधार भैसकेको हुनुपर्छ । यसका लागि उन्नत खेती प्रविधिको मात्रा बढाएर मात्र पुग्दैन, मौसमले पनि साथ दिनुपर्छ, र किसानका साना–ठूला समस्या पनि हल भएको हुनुपर्छ ।
तर ठूलो सुधार त परको कुरा, सरकारले रासायनिक मलकै व्यवस्थासम्म मिलाउन सकेको छैन । गत वर्ष विनियोजित बजेटअनुसार समयमै मल खरिद नगरिँदा यसपालि गोदामहरू खाली छन् । आगामी वर्षका लागि त झन्, रासायनिक मलको बजेट झन्डै ५० प्रतिशतले घटाइएको छ । अहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमूल्यमा भएको तीव्र उतारचढावका कारण मल आयातमा कठिनाइ भैरहेका बेला आगामी वर्षका लागि बजेट नै आधा मात्रै छुट्याइनु आश्चर्यजनक छ । समस्या एकातिर र लक्ष्य अर्कातिरको यो अवस्थाबाट सरकारले खेतीकिसानीको पीडा तथा वास्तविकता नबुझेको देखिन्छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार वर्षमा दुईतीन बाली लगाउँदा वार्षिक १२ लाख टन मल आवश्यक पर्छ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिटन डीएपी करिब १२०० डलर र युरिया करिब ८२० डलरमा कारोबार भइरहेको छ । यस हिसाबले धान, गहुँकै लागि मात्रै साढे ४ लाख टन मल ल्याउन करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्छ । तर, चालु आर्थिक वर्षका लागि पौने २८ अर्ब रुपैयाँ निकासा दिएको सरकारले आगामी वर्षका लागि १५ अर्ब मात्र छुट्याएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमूल्य तीव्र रूपमा आकासिएन भने पनि उक्त रकमले २ लाख टन मल किन्न पनि मुस्किल पर्छ । यसको अर्थ हो, सरकारले थप बजेटको प्रबन्ध नमिलाएमा आगामी वर्ष मल अभावको अवस्था अझ भयावह हुने निश्चित छ । यसरी मल आपूर्तिमै समस्या हुने भएपछि कृषि उत्पादन बढ्ने सरकारी घोषणा कसरी पूरा होला ?
चालु आर्थिक वर्षमा २९ अर्ब छुट्याएर २७ अर्ब ७१ करोड बजेट निकासा गर्दा त खरिदको निर्णय नै ढिला भएकाले मल कहिले र कहाँबाट आउँछ, निश्चित छैन । बर्खे धान रोपाइँ सुरु हुन लागिसक्दा पनि सरकारी गोदामहरू रित्तै छन् । कति स्थानमा रोपाइँ सुरु भैसक्यो, तर रोपेको १२/१५ दिनमा चाहिने युरिया मल कतै पनि नभएको किसानको दुखेसो छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य धेरै बढेकाले यसपालि ग्लोबल टेन्डरबाट खरिद नगरेको सरकारले जीटूजी प्रक्रियामार्फत खेपअनुसार रकम तिर्ने गरी ५ वर्षसम्म मल ल्याउन गत फागुनमा भारतसित समझदारी गरेको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लुम्बिनी भ्रमणमा आउनुअघि नै यसबारे ठोस प्रगति हुने बताइएको थियो । तर अहिलेसम्म जीटूजीको मल आयात हुन सकेको छैन ।
धानका लागि समयमै मल नपाउँदा किसानले मात्र सास्ती भोग्नुपर्दैन, मुलुकको प्रमुख बाली भएकाले अर्थतन्त्रको आकारमै फरक पर्छ । धानको उत्पादन घट्दा चालु आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान २३.९५ प्रतिशत मात्र हुने केन्द्रीय तथ्यांक विभागको अनुमान छ, जबकि गत वर्ष यो २४.९० प्रतिशत थियो । अब मल अभावका कारण उत्पादन घट्यो भने आगामी वर्ष पनि अहिलेकै नियति दोहोरिन सक्छ । त्यसैले सरकारको नेतृत्वले नै यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर समझदारीबमोजिम भारतबाट मल ल्याउन तीव्र पहल गर्नुपर्छ । बाली लगाउने मुख्य मौसममै किसानहरू मलको खोजीमा भौंतारिनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ । मुलुकको यो सदाबहार समस्याबाट किसानलाई मुक्त गरेमा मात्रै उत्पादनवृद्धिको लक्ष्यमा अघि बढ्न सकिन्छ ।
उत्पादकत्व नघट्ने गरी जैविक खेतीको अभ्यास देशभर सुरु भएमा मात्र रासायनिक मलका लागि यति विघ्न तड्पिनुपर्दैन । तर, आजै त्यस्तो अवस्था छैन । जमिनको उर्वराशक्ति दीर्घकालसम्म कायम राख्न, पर्यावरण जोगाउन र स्वास्थ्यकर कृषि उत्पादनका लागि रासायनिक मलको प्रयोगलाई घटाउनुपर्ने भए पनि बिनायोजना एकैचोटि खेतीलाई पूर्ण रूपमा जैविक बनाउन खोज्दा श्रीलंकामा कृषि उत्पादनमा ठूलो ह्रास आएको तथ्य ताजै छ । कृषि उत्पादन र यसको वृद्धिदरको मात्रा नघट्ने गरी प्रांगारिक मल प्रयोगको विधि–ज्ञान आम किसानमा नहुँदासम्म रासायनिक मल प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन । त्यसैले, विश्वबजारको प्रतिकूलता चिर्न तथा अनिश्चय हटाउन सरकारले भारतसित शीघ्र पहल गर्नुपर्छ । र जसरी हुन्छ, अहिलेको मल अभाव अन्त्य गरी सरकारले अर्को वर्ष समयमै मल किन्न स्रोत पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
एकल महिला तथा बालवालिकालाई आर्थिक सहयोग
आजभोलि समाचारमा हामीले बलात्कारका घटना धेरै सुनिरहेका छौं। विवाहित तथा अविवाहित भिन्न भिन्न उमेर समुदायका महिलाहरू यसबाट पीडित हुँदै आइरहेका छन्। तथापि पुरुषहरू पनि यसबाट पीडित छैनन् भन्न सकिंदैन। यी घटनाहरूमा कतिपय पीडितहरू अझै पनि समाजमा खुलेर आफू पीडित भएको भनेर बोल्न सकिरहेका छैनन् भने कतिपयलाई आफू पीडित भएको भन्ने जानकारी समेत छैन। यस्तैमा कसैले […]